Amaphutha Okumaketha Kwezenhlalo Okufanele Uwagweme | Martech Zone
NgeSonto, ngoJulayi 5, i-2015 NgeSonto, ngoJulayi 5, i-2015 Douglas Karr
Kaningi kunalokho, ngizwa izinkampani eziningi ngokwengeziwe zikhuluma ngemithombo yezokuxhumana sengathi kungezinye nje izindlela zokusakaza. Imithombo yezokuxhumana ingaphezu kwalokho. Imithombo yezokuxhumana ingahlaziywa ngobuhlakani, ibhekwe ukuthola impendulo namathuba, isetshenziselwe ukuxhumana namathemba namakhasimende, isetshenziselwa ukukhomba nokwazisa ngomkhiqizo wakho kuzethameli ezifanele, futhi kunikezwe amandla ukwandisa igunya nodumo lwabasebenzi bakho nomkhiqizo.
Noma yiliphi isu lokumaketha ledijithali elisebenzayo lifaka phakathi ingxenye ebalulekile yezokuxhumana. Ukuqala noma cha, kungelinye lamapulatifomu amahle kakhulu wedijithali wokuqhubela phambili amabhizinisi phambili ngokushesha, inqobo nje uma ukumaketha kwezokuxhumana kwenziwa kahle. Kwabasha abasafikayo embonini yezentengiso yedijithali, ukwenza umbono omuhle ezinkundleni zokuxhumana kubaluleke kakhulu njengoba bethola ithuba elilodwa lokwenza okulungile. Ukulahlekelwa yilelo thuba kusho ukuhlehlisa abancintisana nabo nokulungisa idumela ngokwalo okungewona umsebenzi olula kangako. UJomer Gregorio, iDigital Marketing ePhilippines
Nawa Amaphutha wokumaketha wezenhlalo ama-8 okufanele uwagweme
Ukungabi nalutho isu lokuxhumana kwezenhlalo noma yini.
Idala ama-akhawunti ku- amapulatifomu amaningi kakhulu maduzane.
Ukukhokhela i- abalandeli bokukhohlisa.
Ukukhuluma kakhulu mayelana nomkhiqizo nomkhiqizo kuphela.
Kusetshenziswa okungasebenzi futhi ama-hashtag amaningi.
Ukwabelana okuningi kakhulu izibuyekezo ngesikhathi esincane. (Kepha kungenzeka ungabi njalo ukwabelana kaningi ngangokunokwenzeka)
Khohlwa uku ukuhlolwa kokubukwa.
Ukunganaki i- social isici sezinkundla zokuxhumana.
Iningi lala maphutha liyafana ne-infographic edlule esabelane ngayo amaphutha ezokuxhumana nabantu kwezamabhizinisi. Into eyodwa ebalulekile engingayengeza kulokhu ukuthi kufanele uhlale uzama ukwakha inani futhi uholele abalandeli bakho ocingweni lokwenza okuthile. Angiqondile ukufakwa ngakho konke ukuvuselelwa, ngigcina engqondweni ukuthi isu lakho kufanele lifake amalungu aholayo wezethameli abuyele kubhreyi yakho ukuze ayilandele, ifeni, idemo, ukulanda, ukubhalisa noma ukuguqula.
Tags: ama-digital marketing philippinesimithombo yezokuxhumana infographicSocial Media Marketingamaphutha wokumaketha ezokuxhumana nabantuamaphutha ezokuxhumana nabantu
Mar 12, 2016 ku-11: 11 AM
Vumelana ngokuphelele namaphutha owashilo ngenhla.
Lawa amaphutha ezokuxhumana avame kakhulu okwenziwa ngabantu. Ama-social medias yizindawo ezi-2 ezihamba phambili zokushayela abathengi abangaba khona kanye nabafundi ngemuva kwezinjini zokusesha.
Kanye nalawa maphutha, ukunganikeli ngezibuyekezo ezijwayelekile nakho kuyiphutha elijwayelekile njengoba ngicabanga. Sengibonile izinhlobo eziningi kakhulu kuFacebook ezingaze zinakekele izithameli zazo yingakho zingenakho ukuzibandakanya.
Abantu bahlala befuna ukuzijabulisa noma okuthile okungagcina ama-themeelves ematasa futhi Uma noma iluphi uhlobo lomkhiqizo lungahlinzeki ngalolo hlobo lokuqukethwe kungahle kube namathuba aphezulu okuthi izilaleli zizokhohlwa igama lomkhiqizo wazo.
Ngakho-ke ukugcina igama labo ezingqondweni zezilaleli zabo, kumele babanikeze okuqukethwe okunokusiza, ukujabulisa nokugcina izilaleli zabo zimatasa.
Ngiyajabula ukuthi ubalule lawa maphutha amakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Ngakho-ke ngiyabonga ngokuhlanganyela nathi. 😀
Mar 13, 2016 ku-3: 43 PM
Siyabonga ngezengezo zakho - ngiyavuma ngokuphelele David!
Siyabonga ngokuqonda okuhle nezikhumbuzo! Konke lokhu kuyiqiniso. Ngiyavuma ngokuqinile! Ukuthumela okuthunyelwe okuningi kakhulu ngesikhathi esifushane kuyiphutha ngempela futhi ngivame ukuhlangabezana nale nkinga. Ngisakhumbula ngenkathi ngisaqala, ngithumela okuqukethwe kathathu ngosuku futhi abantu bavele bakushaya indiva ngokukhethekile lapho isihloko singekho mnandi futhi abafundi bengakwazi ukuhlobana. kufanele ihlolwe njalo. Okuthunyelwe okuhle!